ITUNES: NISY HADISOANA TSY FANTATRA 0XE8000065 NITRANGA. - ITUNES - 2019
Fomba famahana ny fahadisoana 0xe8000065 amin'ny iTunes
Raha mampiasa iTunes, dia mety ho tratry ny fahadisoana tampoka ny mpampiasa tsirairay, aorian'izay dia tsy hitranga ny fiasan'ny fampitam-baovao. Raha sendra misy fahadisoana 0xe8000065 ianao rehefa mampifandray na manitsy ny fitaovana Apple, dia ity toro-hevitra ity dia hahita toro-hevitra fototra izay ahafahanao manafoana ity hadisoana ity.
Ny fahadisoana 0xe8000065, amin'ny fitsipika, dia miseho noho ny fahaverezan'ny fifandraisana eo amin'ny gadget sy iTunes. Ny endriky ny fahadisoana dia mety miteraka antony maro samihafa, izay midika fa misy fomba maro hanafoanana izany.
Fomba handaminana ny fahadisoana 0xe8000065
Fomba 1: fitaovana famerenana miverimberina
Ny ankamaroan'ny fahadisoana nitranga tao iTunes, dia vokatry ny tsy fahombiazan'ny solosaina na gadget.
Manaova rafitra ara-dalàna ho an'ny ordinatera, ary ho an'ny gadget api, dia tsara ny manery ny fanavaozana: Ataovy izany, tanteraho ny hery sy ny fanalahidy an-trano mandritra ny 10 segondra mandra-piverin'ilay fitaovana tampoka.
Rehefa tapaka ny fitaovana rehetra, manandrama indray misintona amin'ny iTunes ary jereo ny fahadisoana.
Fomba 2: Fanoloana cable
Araka ny fampisehoana, ny fahadisoana 0xe8000065 dia miseho noho ny fampiasana cable tsy nalaina tany aloha na simba.
Ny vahaolana dia tsotra: raha toa ka mampiasa tsipika tsy fantatra (ary na dia Apple-certified) aza izahay, dia manolo-kevitra ny hanolo foana azy hatrany amin'ny voalohany.
Toy izany ihany koa ny toe-javatra mitranga: ny kinky, ny manodinkodina, ny okontana eo amin'ny connector dia mety hahatonga ny fahadisoana 0xe8000065, izay midika fa tokony hanandrana mampiasa cable iray hafa ianao, izay tena ilaina tanteraka.
Fomba 3: Mizara iTunes
Ny version of iTunes izay efa voafintina dia mety ho lasa fototry ny fahadisoana 0xe8000065, izay mila mijery fotsiny ny programa momba ny fanavaozana, ary raha ilaina, dia manatanteraka ny fametrahana azy ireo.
Jereo koa: Ahoana ny fanavaozana iTunes amin'ny solosainao
Fomba 4: Mampifandray ny fitaovana amin'ny port USB hafa
Amin'ity fomba ity, manoro hevitra ny mampifandray ny iPod, iPad na iPhone ianao amin'ny port USB hafa amin'ny solosainao.
Raha manana ordinateran'ny solosaina ianao dia ho tsara kokoa raha mampifandray ny telegrama ho any amin'ny seranana eo amin'ny sisin'ny rafi-pandaharana ianao, fa manalavira USB 3.0 (matetika no asongadina amin'ny manga io seranana io). Ankoatra izany, rehefa mampifandray, dia tokony hialanao ny ports izay naorina ao amin'ny klavier, USB hubs ary fitaovana hafa mitovy.
Fomba 5: Esory ny fitaovana USB rehetra
Ny fahadisoana 0xe8000065 dia mety hitranga indraindray noho ny fitaovana USB hafa izay mifanohitra amin'ny gadget Apple.
Raha te hanamarina izany ianao, esory amin'ny solosaina ny fitaovana USB rehetra, afa-tsy ny gadona apiaka, azonao atao ny mamela ny fifandraisana sy ny mozika.
Fomba 6: Install Windows Updates
Raha tsy manao tsirambina ny fanavaozana ny fanavaozana amin'ny Windows ianao, dia mety hitranga ny fahadisoana 0xe8000065 noho ny rafitra rafitra efa antitra.
Ho an'ny Windows 7 dia alefaso amin'ny menu "Control Panel" - "Windows Update" ary manombohana ny fikaroham-baovao. Ilaina ny fametrahana ireo fanavaozana tsy maintsy atao sy ilaina.
Ho an'ny Windows 10, sokafy ny varavarankely "Masontsivana" famintinana klavier Win + Iary avy eo dia mandeha amin'ny fizarana "Fanavaozana sy fiarovana".
Manaova fanamarinana ho an'ireo fanavaozana, ary avy eo mametraka azy ireo.
Fomba 7: manala ny ordinateran'ny fitazonana
Amin'ity fomba ity, manoro hevitra ny hanadio ny ordinatera "Lockdown" ianao, izay mitahiry rakitra momba ny fampiasana iTunes amin'ny solosainao.
Raha te hanadio ny votoatin'ity lahatahiry ity ianao dia mila manao ireto manaraka ireto:
1. Esory avy ao amin'ny ordinateranao ny fitaovana Apple, ary farano amin'ny iTunes;
2. Sokafy ny baiko fikarohana (amin'ny Windows 7, sokafana "Start", azafady Windows 10, tsindrio Win + Q na tsindrio eo amin'ny loko fanalehibeazana), ary midira ireto baiko manaraka ireto ary sokafy ny valin'ny fikarohana:
3. Sokafy ny lahatahiry "Apple";
4. Kitiho ny lahatahiry "Lockdown" tsindrio havanana ary mifidiana "Delete".
5. Ataovy azo antoka ny hanombohana ny solosaina sy ny gadget Apple, raha tsy izany dia mety ho tratry ny olana vaovao ianao ao amin'ny iTunes.
Fomba 8: manangana iTunes indray
Ny fomba iray hafa hamahana ny olana dia ny fanavaozana iTunes.
Voalohany dia mila manaisotra ny fampitam-baovao amin'ny solosaina ianao, ary mila manao izany tanteraka ianao. Manoro hevitra izahay hampiasa ny Revo Uninstaller hanaisotra iTunes. Ho an'ny antsipirihany momba ity fomba fanesorana ny iTunes ity, dia nilaza tamin'ny iray amin'ireo lahatsoratra navoakanay izahay.
Jereo koa: Ahoana ny fanesorana tanteraka iTunes amin'ny solosainao
Rehefa vita ny fanesorana ny iTunes, atsangano ny ordinatera ary raha vao miditra ny fametrahana ny dikan-teny vaovao amin'ny fampitam-baovao.
Raha ny fitsipika, ireo dia fomba rehetra hamahana ny fahadisoana 0xe8000065 rehefa miasa miaraka amin'ny iTunes. Lazao anay ny fanamarihana raha afaka manampy anao ity lahatsoratra ity, ary inona no fomba nanampy anao hamaha ilay olana.